Trano fitsaboan’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
– Nahatsiaro nahararirary tao anatiko tao aho ka nanantona TRANO FITSABOAN’ANDRIAMANITRA…
– Rehefa notsapain’ny Tompo ny tosi-dràko dia hita fa ambany ary tsy ampy ny TAHA-PAHAVITRIHAKO MAMONJY NY ALAHADY
– Rehefa notsapain’ny Tompo ny hafanàna dia tafakatra 40°C ny mari-panan’ny TSY FAHAVITAKO ADIDY ao amin’ny Fiangonana . Marary aho !!!
– Notarafina avy hatrany ny mombamomba ny foko , hita fa tsy ampy ny fikorian’ny TENA FITIAVANA satria tsentsin’ny FITIAVAN-TENA ny lalan-drà, ka maina ny foko.
– Nanaovana fizahana koa ny vanin-taolako rehetra satria tsapako fa tsy afa-mitia ny MADINIKA intsony aho , dia hita fa tapatapaky ny AVONAVONA sy ny FIALONANA ny taola-mitohy iray tokony ahafahako mitia ny mahantra.
– Hita tamin’ny fitiliana ny masoko koa fa tsy afa-mahita lavitra mihoatra ny fijerena sy fitanisana ny TSY FAHOMBIAZAN’NY HAFA fotsiny aho.
– Rehefa nambarako ny Tompo fa tsy dia mandre loatra koa ny sofiko dia nolazainy fa vokatry ny tsirambina tamin’ny tsy fihainoana ny TENINY sy ny fanaovana tsinontsinona ny SAKRAMENTA NORAISINA no anton’izany.
– Noho ny famindram-pony sy ny fangorahany dia nataon’ny Tompo maimaim-poana ny fizahana fa tsy nandoa vola aho, saingy nanome toky fa hanaraka antsipirihany ny fanafody ara-boajanahary nomeny ahy tamin’izao fahitàna ny marina rehetra momba ahy izao.
Ireto avy ny fanafody tsy maintsy horaisiko:
Rehefa mifoha isa-maraina dia misotro FAHATAHORANA AN’ANDRIAMANITRA eran’ny vera
Alohan’ny mandeha miasa dia maka fikasana mba ho FANASIN’NY TANY eran’ny sotron-dasopy
Isan’ora: MIAMBINA ary MIVAVAKA mba tsy ho latsaka anaty FAKAM-PANAHY (vola, voninahitra, nofo)
Rehefa tafaverina ao an-trano dia mitafy FAHAIZA-MANOMPO NY ANKOHONANA
Ary alohan’ny hatory dia manao FIARAHA-MIVAVAKA SY FANDINIHAN-TENA in-2 ny sotron-dité
Ny TSY FIDONANAM-POANA no fialantsasatra tsara indrindra natolotry ny Tompo ahy
Nentanin’ny Tompo ihany koa aho mba hiverina any Aminy matetika , amin’ny alalan’ny SAKRAMENTAN’NY FAMPIHAVANANA sy ny FIDIRANA FIKAMBANANA MASINA, mba ho fanaraha-maso ny fahasalamako!
Mandra-pahafatiko hoy ny Tompo dia tsy maintsy mihinam-panafody iray maraina, iray atoandro, iray hariva isan’andro aho , dia ny : FINOANA, FANANTENANA ary ny FITIAVANA
Masina Maria Mpanasitrana ny marary ô! Sitrano ny marary rehetra. Amen
(Nandika : Fr. Elie, O.c.d)
Alahady fahafito Paka – 01/06/2014 – Tenin’Andriamanitra
Alahady fahaenina Paka – 25/05/2014 – Toriteny
Alahady – 13/07/2014 – Tenin’Andriamanitra